जीवनशैली – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
काठमाडौं – सरकारले काठमाडौंमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण समुदायमा फैलिएको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन तत्काल परिणाम दिने एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरेको छ। उक्त परीक्षणका आधारमा काठमाडौंमा समुदायमा सङ्क्रमणको अवस्था पत्ता लाग्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार काठमाडौंमा तीन हजार जनामा यस्तो परीक्षण गरिनेछ। सोमबारदेखि सुरु गरिएको […]
काठमाडौं – त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको शवगृहमा पहिलो पटक पुग्दा निकै अत्तालिएकी थिइन् उनी। बाहिर मान्छेको भीडजस्तै त्यहाँ शवको थुप्रो थियो। कति बीभत्स ! कति भयानक ! कसैको टाउको थिएन, कसैको खुट्टा त कसैको आँखा थिएन। तर, त्यसको एक वर्षपछि भने उनलाई शवहरूसँग डर लाग्न छाडेको छ। उनी हुन्, १९ वर्षीया सपना रोका मगर। उनी […]
काठमाडौं – घरभरी अनेकथरी खेलौना छ । बच्चा जन्मनुअघि नै बुवाआमाले कति खेलौनाको जोहो गरिसकेका छन् । आफन्त पाहुना लाग्न आउँदा पनि खेलौना ल्याइदिएका छन् । जन्मदिन जस्ता विशेष अवसरहरुमा त उपहार स्वरुप प्राप्त खेलौनाको थुप्रो नै लागेको छ । घरभित्र खेल्ने, घर बाहिर खेल्ने । आवश्यक्ता अनुसार सबैखाले खेलौना उपलब्ध छ । तर, बालबच्चालाई […]
काठमाडौं – साउन १५ मा शरीर स्वस्थ भएका बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मको अति प्रिय भोजन खीर खाएर साउन १५ मनाइँदै छ । असार १५ मा दही चिउराको स्वाद लिएको ठीक एक महिनापछि साउन १५ मा खीर खाने चलनको विशेष सांस्कृतिक महत्त्व छ । बाग्मती अञ्चल आयुर्वेद औषधालयमा कार्यरत चिकित्सक डा. अञ्जु कार्की भन्नुहुन्छ, “खीर धेरैको प्रिय भोजन […]
अहिलेका बालबालिका एक्लो छन् । उनीहरुसँग खेल्ने आफ्नै दाजुभाई–दिदीबहिनी छैनन् । दौतरी छैनन् । घरभित्रै बसेर उनीहरुले आफैसँग रमाउनु र खेल्नु परेको छ । धेरै दम्पती पनि आफ्ना बालबालिकासँग खेल्न वा संवाद गर्न झन्झट मान्छन् । खासगरी आधुनिक समाजमा हुर्कदै गएका बालबालिकाहरु एक्लोपनको शिकार भएका छन् । र, यो एक्लोपनबाट आफुलाई मुक्त गर्न उनीहरु मोवाइल, […]
श्रीमान् र श्रीमती घरभित्र भएर पनि बोलचाल हुँदैन किन ? एउटै शयन कक्षमा भएर पनि आपसमा भलाकुसारी हुँदैन किन ? एउटै ओछ्यानमा भएर पनि अन्तरङ्ग क्षण साटिरहेका हुँदैनन् किन ? किनभने उनीहरूबीचमा अहिले घुस्रिएको छ, सामाजिक सञ्जाल । अर्थात् फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि । जब उनीहरू सामाजिक सञ्जालभित्र प्रवेश गर्छन्, आफ्ना पार्टनर भुल्छन् । फेसबुक, […]
अहिले मुलुक लकडाउनमा छ । किन ? किनभने मान्छेको भिडभाड र आपसी घुलमिल नहोस् भनेर । कोरोना भाइरसको औषधि एवं खोप आइसकेको छैन । यही कारण कोरोना भाइरसजस्तो संक्रामक रोगबाट जोगिन लकडाउनलाई अहिले एउटा विकल्पको रुपमा अपनाइएको हो । तर सडकमा हेरौं वा सहरमा, गल्लीमा पुगौं वा बस्तीमा, मान्छेहरू चहलपहल कम छैन । किनमेल गर्न […]
विगतमा बुढ्यौलीको समस्या मानिन्थ्यो उच्च रक्तचाप । अहिले युवा एवं किशोरमा समेत यो समस्या देखिन्छ । खासगरी खराब जीवनशैली, खराब खानपान र तनावपूर्ण दैनिकी नै उच्च रक्तचापको कारण बनिरहेको छ । त्यसो त वंशानुगत रुपमा पनि कतिपयलाई उच्च रक्तचाप हुने गर्छ, कतिपयको मिर्गौला वा मुटुमा समस्या भएमा पनि उच्च रक्तचाप हुनसक्छ । यद्यपि आम कारण […]
अहिले धेरैको लागि अनिवार्य आवश्यक्ता बनेको छ, चस्मा । अर्थात उनीहरुमा कुनै न कुनै आँखाको समस्या छ । आँखाको दृष्टि नै गुमाउनु पर्‍यो भने ? सामान्य अवस्थामा भएकाले यस्तो कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । जबकी आँखामा के कारणले क्षति पुग्छ, कसरी यसको दृष्टि सुरक्षित राख्ने भनेर खासै सरोकार राखेको पनि पाइदैन । खासगरी मोबाइल, ल्यापटप […]